Huawei P30 Pro, in ka badan kamarad wadne istaag ah [Dib u eegis] | Androidsis
Sidaad ogtahay, tan iyo maalintii la soo saaray Paris waxaan gacanta ku haynaa wax aan ka yareyn Huawei P30 Pro, waan kaa tagaynaa link this dareenkeena ugu horeeya iyo dabcan sanduuqa qalabka. Si kastaba ha noqotee, waxaan horeyba gacanta ugu haynay ku dhowaad toddobaad waxaana hadda la joogaa waqtigii aan ku siin lahaa fursad aad ku aragto falanqeynteenna qoto-dheer.
Si kastaba ha noqotee, si loo gaaro gabagabo waa lagama maarmaan inaad nalasocoto, maadaama aan kuu sheegeyno mid kasta oo ka mid ah faahfaahinteeda. Soo hel dhammaan faahfaahinta Huawei P30 Pro taas oo aad uga badan kamarad qurux badan iyo madax-bannaanid badan, ma ugu fiican tahay?
Baahnayn in la sheego Waxaan kugu martiqaadayaa inaad dhex marto fiidiyaha halkaasoo aad si faahfaahsan uga arki doontid wax kasta oo aan halkan kuugu sheegi karoSi kastaba ha noqotee, xogtu waxay noqon doontaa mid gaar ah oo la taaban karo falanqeyntan qoraalka ah, halkaasoo aad awood u yeelan doonto inaad si dhakhso leh ugu fiirsato oo keliya faahfaahinta aad adiga xiisaha u leh. Si kastaba ha noqotee, fursad wanaagsan oo lagu taageero bulshada Androidsis ayaa si sax ah u fiirineysa fiidiyowyadeena oo nooga taga "sida" haddii aad ka heshay. Bal si toos ah u eeg terminaalkan Amazon.
1 Naqshadeynta iyo agabka: Waxaa macquul ah inay yihiin kuwa ugu quruxda badan suuqa
2 Tusmada xirmada - Feejignaanta
3 Astaamaha: Waxqabadka sare, qalabka la tijaabiyey
4 Kaamirooyinka iyo shaashadda: Kamaradda ugu fiican suuqa ee shaashadda "caadi ah"
5 Dareemka shaashadda ugu fiican, is-maamul iyo wax ka badan
6.3 ugu fiican
Naqshadeynta iyo agabka: Waxaa macquul ah inay yihiin kuwa ugu quruxda badan suuqa
Heerka nashqadeynta, Huawei waxay hilibka oo dhan dul dhigtay dubka, waxaan mar kale uhelaynaa maadada birta ah ee loox ka sameysan iyo dhalo gadaal ah. Muraayadahan dhabarka waxyar ayaa ka qalooca dhinacyada, sida kiiska shaashadda, tani waxay ka dhigeysaa mid waji leh, in kasta oo ay ku dhowdahay 6,5 inji, mid ka mid ah taleefannada ugu raaxada badan ee aan ku falanqeynay waqtigan oo dhan, waxoogaa ka raaxo badan Huawei Mate 20 Pro oo aad uga raaxo badan terminaalka tartanka tooska ah sida iPhone XS Max. Qalabkan waxaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa dhowr midab: Pearl White (saafi cad), Breathing Crystal (unugga aan falanqeyneyno), Madow, Amber Sunrise (gradient u dhexeeya casaanka iyo liinta) iyo Aurora (kala qaadka u dhexeeya buluug iyo cagaar).
Cabirrada: 158 x 73,4 x 8,4 mm
Miisaanka: Gram 192
Midabada: Pearl White, Neefsashada Crystal, Madow, Amber Sunrise iyo Aurora.
Sida aan aragno, waa mid is haysta. Sidoo kale xagga hore, halkaasoo aan ku leenahay qaab aad u yar oo hoose, oo ku dhowaad aan dhinacna ka jirin laabaro sababo la xiriira qalooca shaashadda iyo dhammaynta aagga sare iyadoo leh Saamaynta darajada darajada Waxa ugu yar, kana tagaya "qaangaadhka" weyn ee Huawei Mate 20 Pro. Waxaan ku kala duwanahay jiilkii hore iyo kuwa hadda jira oo dhan, xaqiiqda ah in cirifka kore iyo hoose ay leeyihiin xagal qumman oo dhameystiraya naqshad Waa inaan uqalmaa sida gaarka ah. Qabanqaabada kamaradda toosan waxay ku sii socotaa taxanaha 'P Series', halka Faahfaahin si loo tixgeliyo waa xaqiiqda ah in tooshka iyo kamaradda ToF iyo dareeraha leysarka ay ku dhex jiraan daboolka muraayadda dambe, wax u dhaw in aanu jirin teleefon gacmeedka casriga ah ee casriga ah oo shaqsiyan aniga soo jiitay. Heerka faraha iyo wasakhda, sida had iyo jeer uga dhacda boosteejooyinkan jilicsan, faraha ayaa noqon doona shirkad sannado badan socota.
Tusmada xirmada - Feejignaanta
Heerka unboxing-ka Huawei Wax cusub ma soo saarin, qaar badan ayaa ku riyooday ka mid noqoshada dhagaha dhagaha ama wixii kale ee faahfaahin ah ee naga tagaya afka furan, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in Huawei's P Series uusan waligiis aheyn nooca loo yaqaan 'Premium range', sidaa darteed maahan inuu in badan naga yaabsado . Waxaan haynaa sanduuq ficil ahaan u eg noocyadii hore oo ay ku jiraan waxaas oo dhan: 40W xeedho dhakhso leh; USB-C sameecadaha dhagaha; Buugga dammaanadda iyo tilmaamaha; Kiis silikoon hufan; Fiilooyinka USB-C ee amraya; Shirkadda Huawei P30 Pro.
Waxa ugu cajiibka badan shaki la'aan waa lacagta degdega ah ee ilaa 40W oo ay kujirto ugu badnaan, awoodna uleh ina siiso a 71% wadarta batteriga nus saac, Xitaa way ka sii yaab badan tahay haddii aan tixgelinno in qalabkani uusan ka yarayn 4.200 Mah. USB-ga USB-C-ka ee ku shubanaya USB-ka iyo sameecadaha dhagaha ayaa ku jira khadka Huawei. Adiguna waxaad dhahdaa, maxaa sameecadda USB-C loo sameeyaa? Waa hagaag sababtoo ah markan Huawei wuxuu ka tagay 3,5mm Jack oo ah qaabka Pro ee P30, in kasta oo ay tahay inaan tilmaanno inaanaan haysan doonin USB-C ilaa 3,5mm Jack adapter, faahfaahin ah oo murugo iga dhigtay.
Astaamaha: Waxqabadka sare, qalabka la tijaabiyey
Gacaliye Kirin 980 siddeed-core -
Kaydinta gudaha 128/256/512 GB (Kordhinta nanoSD)
Kaamirada gadaal 40 MP oo leh fur f / 1.6 + 20 MP xagal ballaadhan 120º oo leh fur f / 2.2 + 8 MP oo leh aperture f / 3.4 + TOF sensor
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 jack 3.5 mm USB-C WiFi 802.11 a / c GPS GLONASS IP68
Tilmaamo kale Shaashada sawirka shaashadda - NFC - Furitaanka wajiga - Dolby Atmos - Dareere infrared
Qiimaha 949 euros
Astaamaha Huawei P30 Pro ayaa si fiican loo yaqaan, kooxda Huawei uma muuqato inay wax badan ikhtiraacdo ee taxanaha 'P Series', oo doorta inay mudnaan siiso taxanaha 'Mate Series' kiiskan. Si kastaba ha noqotee, tani waxay leedahay faa'iido muhiim ah, taasina waa in Huawei P30 uu doortay Kirin 980 sideed-xuddun iyo awood la xaqiijiyay, oo ina siisa 261.115 dhibco AnTuTu, oo ay weheliyaan 8 GB oo RAM ah iyo Mali G76.
Sidaa darteed, waa inaan ku sharfnaano qaybaha kale si aan u iftiiminno, tusaale ahaan xaqiiqda inay ku jirto dareemayaal infrared ah oo noo oggolaan doona, iyo waxyaabo kale, si loo xakameeyo telefishanka iyo qaboojiyaha. Heerka codka waxaan leenahay nidaam rikoodh hal abuur leh, oo leh sameecadda ugu weyn xagga hoose, halka kuhadalka taleefanka uu ku yaalo muraayadda gadaashiisa. Waxaan tijaabinay iyo Waxaan xaqiijinay in tayada iyo awooda afhayeenkani isku dhafan yahay shaashadda ay soo bandhigeyso waxqabad ugu yaraan la mid ah kan afhayeenka dhaqanka, dhinac kale oo ka mid ah heerka hal-abuurnimada oo ku daraya lambarro loogu talagalay Huawei P30 Pro.
Kaamirooyinka iyo shaashadda: Kamaradda ugu fiican suuqa ee shaashadda "caadi ah"
Waxaan joognaa heer kamarad leh iskudhafka gadaal ee ugufiican suuqa, ma dhahno sidaas, DxOMark ayaa cadeeyay, taas oo siineysa wax aan kayar 112 dhibcood ka tagida marka hore. Waxaan leenahay dareeraha 40 MP oo leh aperture f / 1.6, 20 MP oo kale xagal balaaran oo 120º leh aperture f / 2.2 ugu dambeyntiina 8 MP oo leh aperture f / 3.4 dhamaantoodna uu weheliyo dareemayaal ToF ah oo na siinaya natiijo ku dhaw oo dhameystiran «qaabka sawirka». Kaamirada hore ma jiraan wax kayar 32 MP oo leh fur f / 2.0 iyo dhamaan astaamaha heerka softiweer ee 'walaalo waaweyn. Waxaan hoosta kaaga tagi doonaa liiska imtixaanada si aad ugu raaxeysato kanaga isku dhafan 1x, 5x, 10x iyo ilaa 50x, horay looma arag qalab mobiil oo leh astaamahan, erey ahaan: cajiib. Dhanka kale, waxaan leenahay qaabab duubitaan oo kala duwan oo aan ka dhaxalnay Huawei Mate 20 Pro sida midabka AI, saameyn muuqaal ah oo lagu dabaqay kamaradda fiidiyowga tooska ah iyo miirayaasha qaarkood oo noo oggolaanaya natiijooyin wanaagsan. Waxaan kaa codsaneynaa inaad dhex marto tijaabada kamaradeena ee aan qaadi doono maalmo yar gudahood.
Sida shaashadda, waxaan ku raaxeysaneynaa 6,47-inch OLED guddi leh Full HD + xallinta 2.340 x 1.080 pixels iyo saamiga 19.5: 9. wax intaa ka badan iyo wax ka yarba ma jiraan. Muran badan oo loogu talagalay hoos u dhigista xalka 2K ee ay bixiso Huawei Mate 20 Pro, gaar ahaan tixgelinta cabirka muhiimka ah ee shaashadda. Waa run in Huawei ku sharad geli lahayd wax yar oo xal ah, laakiin si daacad ah, isticmaalka maalinlaha ah looma maqnaado, dhab ahaantii waxaan u arkaa inay ku qanacsan tahay xitaa heerarka rabitaanka, in kasta oo "saamaynta qaansoroobaad" ama kala duwanaanshaha midabka kullamada OLED ee astaamahani ay inta badan muuqdaan, inbadan oo ogna inay ku qalooca tahay dhinacyada.
Dareemka shaashadda ugu fiican, is-maamul iyo wax ka badan
Waxaan ka helay imtixaannada tirada badan jawaab deg deg ah su'aalahaaga, Dareenka faraha ee shaashadda ee Huawei P30 Pro ayaa la muujiyay marka la barbardhigo kan Mate 20 Pro iyo kan Samsung Galaxy S10 sida ugu fiican suuqa. (tani waa ra'yigeyga shaqsiyeed). Kii aniga iga dhigay caqabadaha ugu yar intii aan ku jiray wadada isla markaana soo bandhigay natiijooyinka ugu fiican. Hal dhinac oo lagu xisaabtamo helitaanka astaamahan.
Dhinaceeda xagga batteriga waxaan u leenahay xulasho, 4.200 mAh oo leh SuperCharge ilaa 40W ah oo ku siin doona wax aan ka yarayn 70% batariyaal oo kaliya 30 daqiiqo oo lacag bixin ah. Shakhsiyan, xaaladaha caadiga ah, waxaan ku guuleystey inaan gaaro dhamaadka maalinta 30% ee batteriga, anigoo dalbanaya inaad si fudud ku timaado dhamaadka maalinta adigoon walwal qabin iyo isticmaalka aan loo baahnayn inaad sameyso laba maalmood oo aan ku dhowaad lahayn wax qashin ah. Markale Huawei waxay muujisay in baytarigu aad muhiim ugu yahay adeegsadayaashiisa.
Waxaan haynaa astaamo kale oo soo koobaya sheyga sida Dhawaaqa Dolby Atmos Si loogu raaxeysto waxyaabaha maqalka ah ee laga helo barnaamijyada la jaan qaada sida Netflix, ku hadlayaasha ayaa ku filan, iyagoon gaarin heerarka ay bixiyaan boosteejooyinka sida Huawei Mate 20 Pro ama Samsung Galaxy S10 +, laga yaabee inay tahay mid ka mid ah dhibcaheeda xun. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda IP68 caabbinta biyaha in aan tijaabinay maalinteenna maanta oo aad ka arki karto kanaalkeenna Youtube. Dhiniciisa NFC waxay noo oggolaan doontaa, iyo waxyaabo kale, inaan u isticmaalno hababka lacag-bixinta ee aan lala xiriirin iyo WiFi-kiisa laba-geesoodka ah ayaa ka faa'iideysanaya dhammaan "megabytes" ee aan qandaraaska ku qaadannay guriga iyadoo ay ugu wacan tahay kooxda 5 GHz.
EMUI wali ma cabiro
Shaashad 2K ah ayaa u dhigeysa sida ugu fiican suuqa
Waa u xun yahay 3,5mm Jack jecel
Hal mar oo dheeraad ah oo leh qalab guri, waxa aan ugu jeclaa tan Huawei P30 Pro waa EMUAniga, in kasta oo xaqiiqda ah in cusbooneysiinta la helay inta lagu gudajiray falanqaynta EMUI 9.1 ay ahayd mid aad u wanaagsan, gaar ahaan hirgelinta tilmaam dhaqsi dhaqsi leh, haddana wali waxay leedahay codsiyo taxane ah oo lagu rakibo heer caadi ah oo aan ku habboonayn dhamaadka qiimahaan. Dhinaca kale, shaashadda, in kasta oo ay aad u wanaagsan tahay, haddana waxay u baahan tahay aragtidayda cabbiraadda adeegsadaha sababtuna tahay buuxsamida xad dhaafka ah ee midabada ay bixiso.
Tayada qalabka iyo naqshadeynta
Dareeraha ugu fiican ee shaashadda shaashadda ee aan waligay isku dayay
Kaamirada taleefanka ugufiican taariikhda
Ismaamul wanaagsan iyo culeysyo kala duwan
Wixii aan ugu jeclaa waxay ahayd kamaradaada cajiibka ahShaki la'aan waa kan ugu fiican suuqa mana jiraan wax laga cawdo, kaliya ku raaxee sawirrada la qaaday. Dhinaca kale waxaa sawirka faraha ayaa cadeeyay inuu yahay kan ugu fiican kuwa shaashada kujira, halka ismaamulka Waa caro dhab ah, oo noo oggolaaneysa inaan ku raaxeysano terminaalka annagoo aan had iyo jeer ka warqabin faahfaahintaan.
Huawei P30 Pro - Dib u eegis
Waxaan helnay tan boosteejada laga bilaabo 949,99 meelo badan oo iib ah oo ku taal Spain sida Carrefour, marin fudud oo loo helo terminal runti ah "Pro" labadaba wax qabad iyo awoodba, taas oo ka dhigaysa mid xaqiiq ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dhulka Android, xitaa toos ula tartanta guri kale sida Huawei Mate 20 Pro. Si kastaba ha noqotee, kan dambe wuxuu kaliya "lumiyaa" P30 Pro marka la eego kamaradda, mana ahan wax aad u badan, sidaas darteed isla qiimahaas waxaa jiri doona shaki weyn oo ka dhex jira isticmaalaha. Midabada midabka leh ee ay xushay Huawei waxay iila muuqataa aniga mid guuleysanaya, sidaa awgeedna maareynaya inaan ka farxiyo tiro yar oo adeegsadayaal ah shaqsiyaad kala duwan Sidaa darteed waa ra'yigeygii ugu dambeeyay ee aniga oo leh Huawei P30 Pro waxaan isku arkaa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee la dhisay ee Android ee aan ku falanqeeyay Androidsis, qalab aad loogu taliyay, kaas oo leh laydhadhkiisa iyo hooskiisa, laakiin taasi waxay ku xirnaan doontaa a Waqti dheer dhammaan indhaha dadka, gaar ahaan markay shirkaduhu ku degdegaan inay bixiyaan qiimo aan la diidi karin, Miyay noqon doontaa mid ka mid ah iibiyaasha ugu fiican Spain markale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Huawei P30 Pro, wax ka badan kamaradda wadne istaagga [Dib u eegis]
Kaamirada Google waxay ku dareysaa hab mugdi ah iyo animations cusub